MISY Fandaharana Nord 3202 v1 FSX
Ny Nord 3202 dia aseho amin'ny roa configurations: "Solo" fanahafana amin'ny iray mpanamory, "fiaviana roa fanaraha-maso" (DC) fanahafana, izany hoe roa mpanamory eo amin'ny solaitrabe. Io modely io piloted avy amin'ny seza aoriana. Dikan-teny anglisy manontolo (miaraka amin'ny auto-installer) azo jerena eto: https://restauravia.com/page5.html
Ny Nord 3202 dia tokana-maotera monoplane fiaramanidina, natao ho mpanamory fampianarana. Naorin'i Nord-Aviation (Frantsay manufacturor), ny nitranga fahiny nanao ny sidina voalohany tamin'ny Aprily 1957 17. Tany am-piandohana fitaovana amin'ny 240 HP Potez 4D32 maotera sy ny roa-lelany Ratier Mpanosika, dia farany tamin'ny 260 HP turbocharged Potez 34B sy ny telo-lelany Hartzell Mpanosika. Ny solika sy ny rafitra lubrication mamela ny miasa amin'ny toerana rehetra. Aircrafts sasany no farany ho tokana-seza dika amin'ny fipetrahana nanazava fitaovana haka ny Nord 3202 ny fifaninanana aerobatics aptitude.
Indrindra fa natao mba hihaona amin'ny Alat (frantsay Tafika) ilaina, 102 vondrona ao amin'ny Nord 3202 no novokarina.
Voatendry ho ana Habakabaka ny Alat sekoly ny Sidi Bel Abbes (Afrika Avaratra), Le Luc mg
Provence dia Dax (South ofFrance), ny Nord 3202 no nampiofana nandritra ny mihoatra noho 100000 sidina ora maro ireo mpianatra mpanamory, Frantsay sy tany ivelany.
Elatra androm: 9,50 M
Haavony: 2,84 M
Elatra Area: 16,26 m²
Airframe: vy sy ny lamba nilahatra
Elatra Profil: NACA 23017 nivoatra ny NACA 23012
Mikopaka: slotted mikopaka
Gear: manamboatra amin'ny hydropneumatic fampiatoana sy ny rambony kodia
Fineness tahan'ny: 5,5
Foana lanja: 875 kilao (onjam-peo kompà version)
Maximum lanja: 1220 kilao
Motorization Potez: 4D34B 260 HP sy telo-lelany Mpanosika
Maximum ny hafainganam-pandeha: 350 km / h
Cruise haingana: 190 km / h
Valin-drihana: 3000 M
Fiaretana 4h 30
(5ource: Fitehirizam-tahirin-kevitra avy amin'ny restauravia.com)
Gmax modely André Chancel miaraka amin'ny fandraisana anjara ofGilles Faulmeyer (maotera sy Mpanosika)
2D tontonana sy gauges Jean-Michel Renaux
Feo Jean-Michel Renaux
Flight fihetsehana Jean-Pierre olona antonontonony amny'ny mpia
Ground fanova ary manidina fitsapana Benoit Dube